GetEmails: Chọpụta ruo 35% nke Traffic Web Anonymous gị ma too listi Email gị | Martech Zone
Email Marketing na-aga n'ihu ịbụ ọwa dijitalụ ROI kachasị elu na nha nke 38: 1 dị ka ọmụmụ site na Litmus. Zọ kachasị mfe maka uto na ụwa dijitalụ bụ itolite ndepụta email gị yana ndị na-etinye aka na kọntaktị.
Inweta adreesị email ndị ahụ adịghị mfe. Ndị na-ere ahịa na-emefu nnukwu ego na-ebugharị na ebe nrụọrụ weebụ ha na mgbasa ozi akwụ ụgwọ, SEM, SEO, na PR, ma na-ejide adreesị email site na 5% nke ndị ọbịa ahụ.
Ọzọkwa, ndị na-ere ahịa chọrọ ụzọ dị ọnụ ala karịa iji weghachite ndị ọbịa weebụ. Facebook na ngosipụta ngosipụta dị irè, mana ha dị oke ọnụ ma ị nweghị okporo ụzọ. Ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ ugboro ugboro iji weghachite okporo ụzọ ahụ na weebụsaịtị ha.
The GetEmails Email-Dabere Retargeting Ngwọta Isi
Get ozi ịntanetị na-enye ngwanrọ-dika-oru, igwe ojii Email-Dabere Retargeting azịza nke na-enye ndị na-ere ahịa aka ịmata na ijide 35% nke okporo ụzọ weebụ ha na-amaghị aha ha ma nweta adreesị ozi-e na-erubeghị na ndepụta ha.
Maka kọntaktị anakọtara, GetEmails na-enye email, aha mbụ, aha ikpeazụ, ndekọ nzipu ozi, na peeji ọdịda, ma jikọta ya na ndị na-enye ọrụ Email niile (dị ka Klayiyo, ActiveCampaign, na Mailchimp).
GetEmails na-eziga ndị ahịa kọntaktị kọntaktị ha na-enweghị, nke na-enye ha ohere iweghachite ndị nleta weebụ site na email na ozi ziri ezi maka obere akụkụ nke ego ị nweta ozi ịntanetị site na ntanetị mmekọrịta. Ihe ndekọ kọntaktị zuru ezu na-amalite na 25 cents kwa ndekọ, na ndị a lekwasịrị anya nke ukwuu, ndị na-emekọrịta ihe nke ọma nwere ọnụ ọgụgụ na-emepe emepe gburugburu 20 ka 25%. Ndị ahịa anaghị akwụ ụgwọ maka ndekọ ndekọ ugboro abụọ, ha anaghịkwa akwụ ụgwọ maka ndekọ ha nwere.
Ina GetEmails n'efu
Enweghị kaadị akwụmụgwọ achọrọ, enweghị nkwekọrịta, ma ị nwere ike nwelite, wedata, ma ọ bụ kagbuo oge ọ bụla.
GetEmails: Nchịkọta Iwu
GetEmails bụ iwu na USA. Ọ bụ ọ bụghị GDPR ma ọ bụ CASL kwadoro, ya mere teknụzụ adịghị na Europe ma ọ bụ Canada. Ihe nchekwa data GetEmails nwere kọntaktị US na ya.
N'adịghị ka nkwenkwe ndị a ma ama, iwu US CAN-SPAM bụ nwepu aha, kama ịpụ. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụhaala na ị nyere ndị nnata ohere iji pụọ na ịnweta email, ị ga-ekwenye na SP-SPAM. Maka ntuziaka sitere na FTC na iwu US CAN-SPAM, pịa ebe a.
Kedu maka Iwu Nchedo Ndị Ahịa California (CCPA)? Ọ bụ ezie na akụkụ ụfọdụ nke CCPA dị ka GDPR, CCPA bụ ọ bụghị banyere Nwepu-na Email Marketing. CCPA bụ maka igosipụta ndị ahịa na mgbanwe mgbanwe nzuzo. Get ozi ịntanetị is CCPA kwenyere, ndị ahịa na-eme mgbanwe iwu nzuzo dị mkpa.
pịa ebe a maka ngwungwu GetEmails, ezubere maka ịkekọrịta n'etiti ndị ọrụ iwu gị.
Ndabere Omume Kachasị Mma nke Email-Dabere na Email
Email Marketing bụ ihe gbasara nnyefe, nka na sayensị nke ị nweta igbe ozi na igbe nnabata. Mgbapụta bụ maka itinye aka: ọnụego emeghe dị elu, ọnụego pịa dị elu, nnukwu ala na mkpesa dị ala.
Ntughari ozi-e email, ma oburu na emee uzo ziri ezi, nwere oke nnweta. Lee ụfọdụ usoro kacha mma:
Ziga a Daalụ maka ịkwụsị saịtị ahụ email
Maka akara ecommerce, jiri usoro nnabata gị, mana jiri akara isiokwu a maka email izizi
Maka ndị na-ebipụta akwụkwọ, ziga email na ahịrị isiokwu a na ụfọdụ ọdịnaya gị kachasị elu
Mgbe nnabata email usoro, tinye ha gị mgbe nile nzipu ozi ndepụta
Echerela izipu ndị ana-akpọ; melite akpaaka na-eziga email nnabata ozugbo ị natara data
Naanị ọnọdụ ebe GetEmails ahụla nsogbu na mkpesa bụ mgbe ndị ahịa cherere izu abụọ ma ọ bụ karịa izipu
Ziga mgbe ị kachasị elu, echela ka onye na-azụ ahịa chefuo akara gị
Nke a bụ vidiyo banyere ihe ị ga-eziga, yana ihe atụ ole na ole:
Otu esi enweta ozi email: Infographic
Otu esi enweta ozi email: ihe omumu
Ntughari aha nke Imeeli na enyere ndi ahia ecommerce aka ibuputa ndeputa ha na obere uzo nke adreesị email enwetara site na owa ndi mmadu.
Ọ bụ Freida Rothman hụrụ 10x ROI na Black Friday. Ha natara ndu site na GetEmails maka 25 cents, ma kwụọ ụgwọ ọnụahịa nke $ 1.42 na Facebook na Instagram. Ndi GetEmails na-eduga bụ naanị ndu ndị gbanwere.
Freida Rothman Ileba Anya
GetEmails na-enyere ndị nkwusa aka itolite listi email ha site na iji kọntaktị na-eme ihe ma na-alụ ọgụ nsogbu na-adịghị ala ala nke ọ bụla ndị nkwusa bipụtara.
Amụma News Watch enwetara ndị na-ede akwụkwọ maka 20% ihe na-erughị ka ha na-akwụ ụgwọ maka ndị debanyere aha site na ntanetị mmekọrịta na ụbọchị 60 mbụ ha. Nsonaazụ ha gụnyere adreesị email 45,000 natara, 20,000 email meghere (45% emeghe ọnụego) na 11,000 pịa-throughs (25% pịa-site ọnụego)
Amụma News Watch Ileba amụ